व्यवहारमा एकता भएन ? |व्यवहारमा एकता भएन ? – हिपमत
काठमाडौं /नेकपाको मंसिर १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकपछि मात्रै सरकार र पार्टीको भविष्य के हुने भन्ने निक्र्योल हुन्छ । त्यसअघि सबै अनुमानका कुरा मात्रै हुनेछन् ।
तर, अहिले नेकपाबाट दुई अध्यक्षमध्ये एकले अर्कोलाई निकाल्ने प्रयास भइरहेको हल्ला निकै जोडतोडका साथ उठेको छ । खासगरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विभिन्न आरोपसहितको प्रस्ताव पेस गरेपछि अब ओली र प्रचण्डमध्ये एक मात्र नेकपाको अध्यक्ष हुने जस्तो गरी प्रचार भइरहेको छ ।
खासमा त्यस्तो देखिन्न । एमाले र माओवादी एकतापछि बनेको नेकपामा प्रचण्ड मात्र शीर्ष नेता छन् । तर, पूर्वएमालेका धेरै नेता छन् । ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए पनि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम जस्ता एक से एक नेता छन् ।
तर, प्रचण्डलाई अध्यक्षबाट हटाएमा उनीपछि को ? भन्ने अवस्था छ । नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादलको हैसियत एमालेका दोस्रो तहका नेता जतिको पनि छैन । त्यसैले अझै केही समय प्रचण्डले नै नेकपामा नेतृत्व गर्ने अवस्था छ ।
तर, अहिले ओली निकट नेताहरु प्रचण्डलाई हेगको भूत देखाएर तर्साउने प्रयास गरिँदैछ । तर, प्रचण्डले पूर्वएमाले त्यसमा पनि ओलीलाई मात्रै सत्ता र शक्ति आर्जन गर्न पूर्वमाओवादीलाई एमालेमा एकता नगरेको नेताहरु बताउँछन् ।
शुक्रबार, मंसिर १२, २०७७मा प्रकाशित गरिएको
कोविडको भ्याक्सिन किन्न समेत आर्थिक हैसियत छैन नेपालको , मुलुकको आर्थिक हैसियत सुडान भन्दा तल जाने सम्भावना
विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई राजनीतिकको कुनै ज्ञान छैन भनेपछि बबाल
राजाबादीले घेरे विराटनगर हेर्नुस फोटो फिचर सहित
प्रचण्डलाई समाप्त पार्ने यस्तो छ खेल
बालुवा पेलेर तेल निक्लनु र ओली सुध्रनु एकै हो-माधव नेपाल
भारतको सबैभन्दा ठुलो एजेन्ट ओली हो नेता भट्टराई
घरमा लगाउनुस् यी बिरुवा,धन लाभको साथै शान्ति तथा गुडलक प्राप्त हुनेछ
बच्चाको बोली नफुटेर तनाबमा हुनुहुन्छ ? लाटी बाराही जानुहोस !
पाकिस्तानमा तालिबानका पाँच कमाण्डर मारिए
कालीकोटमा गृहमन्त्रीविरुद्ध प्रदर्शन
रवि लामिछाने बिनाको सिधाकुराको भिडियोमा लाइक भन्दा दोब्बर बढी डिसलाइक